Windows ekwentị aghọwo ewu ewu mgbe a ngwa ngwa mmalite. Windows Media Player-eme ọrụ maka nkezi video faịlụ. Otú ọ dị, mgbe ọ na-abịa na-akpọ nile di iche iche nke vidiyo na ọdịyo faịlụ, ọ dịghị software abịa nso VLC. Ọbụna na Windows mobile n'elu ikpo okwu, VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na-eme ka ihe dị ịtụnanya echiche mgbe ọ na-abịa media nkwado.
Ọ bụrụ na ị na-ịmafe windows ekwentị ma ọ bụ chọrọ iji wụnye a pụrụ ịdabere na mgbasa ozi ọkpụkpọ maka ekwentị gị, VLC bụ ihe kasị mma. Otú ọ dị, tupu ị wụnye ya ị ga-mara ihe ole na ole banyere VLC.
Olee otú ibudata na wụnye ngwa na gị Windows ekwentị?
E nwere ụzọ dị iche iche ibudata na ịwụnye VLC ọkpụkpọ na Windows n'elu ikpo okwu ma mgbe ọ na-abịa Windows ekwentị naanị ụzọ wụnye ọ bụ site Windows Store. Ọ dị mfe ma na-eme ihe niile n'ihi na gị. Ebe a bụ ihe dị mfe ndu na-eso mgbe wụnye software.
Gaa gị na ngwa na ekwentị gị ma chọọ Windows Store.
Ugbu a chọọ VLC na gị ụlọ ahịa na enweta na ya.
Na-esote na ihuenyo, niile i nwere ime bụ enweta na Wụnye na ị na-mere.
Gị Windows ekwentị na-akpaghị aka Downloads na VLC na ekwentị gị na installs ya. Ị nwere ike ịchọta VLC gị App s.
Olee otú tinye faịlụ ka VLC media ọkpụkpọ na Windows ekwentị?
A ga-abụ ihe ọ bụla mkpa ka ịgbakwunye faịlụ ma ọ bụ tinye a video ka VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ dị ka ọ na-akpaghị aka na-agbakwụnye videos ka VLC ọkpụkpọ mgbe ịgụ isiokwu site na kọmputa gị. Otú ọ dị, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na anaghị ahụ video na gị windows ekwentị ahụ na-eso nzọụkwụ kwuru n'okpuru ebe a:
Akpa, na-aga Directories, nke na-abụkarị na ntọala ma ọ bụ isi menu dabere na version ị na-eji.
Ugbu a ịnyagharịa ka ọnọdụ nke video na ekwentị gị.
Ndị a bụ mfe ma dị mfe nzọụkwụ, ma ọtụtụ n'ime oge unsupported format bụ nke. Iji jide n'aka na ngwa na-enyocha kwa vidiyo na ngwa gị na-ha na ma na vidio na nchekwa ma mgbe na-ha miri n'okpuru ọtụtụ subfolders.
Gịnị ma ọ bụrụ video faịlụ bụ unsupported on VLC maka Windows ekwentị?
E nwere ole na ole faịlụ na ghara akwado na VLC ngwa maka ekwentị gị dị ka VLC ka na-emepe emepe ọzọ mụ na a pụrụ ịdabere version maka Windows igwe. N'ọnọdụ dị otú ahụ, na-eji a Ntụgharị akpọ Wondershare Video Converter Ultimate, nke na-akwado niile formats na-atọghata ha n'ime ihe ọ bụla chọrọ format ị chọrọ. The Wondershare Ultimate Ntụgharị maara na aka tọghata niile videos ka a VLC format na VLC pụrụ ịmata n'ụzọ dị mfe. Ọ pụtara na ị na-adịghị na-echegbu onwe ọ bụla ọzọ banyere gị videos egwu! Lelee ukara Wondershare website maka ozi ndị ọzọ.
> Resource> Windows> Atụmatụ na iji Jiri VLC on a Windows Phone